နှာတံရှည်မျောက် - ဝီကီပီးဒီးယား
နှာတံရှည်မျောက်သည် သစ်ပင်ပေါ်တွင်ကျက်စားသည့် နီညိုရောင် ကမ္ဘာဟောင်းမျောက် တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အလွန်ကြီးမားသည့်နှာခေါင်း ရှိသည်။ အရှေ့တောင်အာရှဒေသရှိ ဘော်နီယိုကျွန်းတွင်သာ တွေ့ရသည်။ သိပ္ပံအမည်မှာ နာဆာလစ်လာဗာ တက် ဖြစ်သည်။ 
နှာတံရှည်မျောက်ကို ဘော်နီယိုကျွန်းတွင်သာ တွေ့ရှိရသည်။ ဘော်နီယိုပေါ်ရှိ နိုင်ငံသုံးခုစလုံး (မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ဘရူနိုင်း) တွင် တွေ့ရှိရသည်။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများနှင့် မြစ်ကမ်းတလျှောက်တွင် တွေ့ရသည်။ ဒီရေလွှမ်းသော မြေနိမ့်ပိုင်းဒေသများတွင်သာ တွေ့ရသည်။
↑ Bradon-Jones D., Eudey A. A., Geissmann T., Groves C. P., Melnick D. J., Morales J. C., Shekelle M., Stewart C. B. (2004). "Asian primate classification". International Journal of Primatology. 25: 97–164. doi:10.1023/B:IJOP.0000014647.18720.32.
↑ Brandon-Jones D., Eudey A. A., Geissmann T., Groves C. P., Melnick D. J., Morales J. C., Shekelle M., Stewart C. B. (2004). "Asian primate classification". Int. J. Primatol. 25 (1): 97–164. doi:10.1023/B:IJOP.0000014647.18720.32.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နှာတံရှည်မျောက်&oldid=696659" မှ ရယူရန်
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
ဤစာမျက်နှာကို ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။